मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीबाट उद्घाटन गराउन ठिक्क पारिएको भवन एमाले सांसदले अघिल्लै दिन भ्याए ! – Karnalikhabar
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीबाट उद्घाटन गराउन ठिक्क पारिएको भवन एमाले सांसदले अघिल्लै दिन भ्याए !
धनकुटा नगरपालिका २ स्थित भिरगाउँमा आठ कोठे पक्की स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाद्वारा १ करोड ९७ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको उद्घाटन शनिबार शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गर्ने तय भएको थियो ।
यसका लागि झाँक्री शुक्रबार नै विराटनगर हुँदै धनकुटातिर उक्लेकी छन् । तर, मन्त्री झाँक्री धनकुटा पुग्नुअगावै धनकुटाका एमाले सांसद राजेन्द्र राईले भिरगाउँ पुगेर भवन उद्घाटन गरिभ्याएका छन् ।
धनुकुटाका नेकपा एकीकृतका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीज्यू उद्घाटनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ । तर, एमाले सांसद राईले आजै भवन रिवन काटेर भवन उद्घाटन गरेछन् ।’ शहरी विकास अन्तरगत बनेको उक्त स्वास्थ्य चौधरी मन्त्री झाँक्रीबाट उद्घाटन गराउने पार्टीले तयारी गरेको उनले बताए ।
शुक्रबार विराटनगर ओर्लिएकी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव समेत रहेकी मन्त्री झाँक्री विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी बनेर धरान हुँदै भेडेटारतिर उक्लिएकी छिन् ।
धनकुटाबाट एकीकृतका कार्यकर्ता मन्त्रीलाई ‘रिसिभ’ गर्न भेडेटार पुगेका छन् । धनकुटामा मन्त्री झाँक्रीले पार्टीको नगरसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
शहरी विकास कार्यालय धनकुटाले मन्त्री झाँक्रीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरी शिलालेखसमेत तयार पारेको थियो । तर, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष चन्द्रलाल तामाङले नयाँ शिलालेख बनाएर सांसद राईको हातबाट उद्घाटन गराएका हुन् ।
सहरी विकास कार्यालयका प्रमुख रञ्जन दासले रातोपाटीसँग भने, ‘शनिबार मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्यचौकी उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । शिलालेख बनाएर पठाइसकिएको छ ।’​ शुक्रबारै सांसद राईले उद्घाटन गरिसके त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा दासले भने, ‘त्यो हामीलाई जानकारी छैन । मन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो ।’
अघिल्लो - लगातार बढीरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कतिको घटेको मूल्य ?